Accident Archives - विवेचना
ठक्करबाट दुई साइकलयात्रीको मृत्यु
बिर्तामोड, वैशाख २९ । झापाको मेचीनगर १० मा शनिबार ना. ४ख २८८१ नम्बरको बसले ठक्कर दिँदा नामथर वतन नखुलेका साइकलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । मृतकको हालसम्म सनाखत हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मृतक गहँुगोरो वर्णको उचाइ ५ फिट ४ इन्च, केश कालो छोटो …
शान्तिनगर, वैशाख २१ । झापाको बुद्धशान्ति ४ हापेनचोकमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा शुक्रबार एक युवाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बुद्धशान्ति ४ बाँझो खेतका २२ वर्षीय अमृत आले मगर रहेका छन् । बिहान साढे ६ बजे बुधबारेबाट घर जाँदै गर्दा बुद्धशान्ति ४ बाँझो खेतका आले मगर मे. ८ …
विद्यालय बसको ठक्करबाट मोरङमा बालिकाको मृत्यु
विराटनगर , वैशाख २१ । मोरङको रङ्गेली नगरपालिका–२ मा बिहीबार साँझ विद्यालयको बसको ठक्करबाट एक बालिकाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । सोही नगरपालिका–३ बस्ने विनोद कार्कीकी तीन वर्षीया छोरी सुजिका कार्कीको मृत्यु भएको १ नं प्रहरी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । ठक्कर दिने धनपालथानस्थित एक अंग्रेजी बोडिङ स्कूलको को १ …
बिर्तामोड, चैत ५ । झापा बिर्तामोड ६ काली मन्दिरस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको मोटरसाइकलले टक्कर दिँदा तीनजना घाइते भएका छन् । मे. ६ प ८५३८ नम्बरको मोटरसाइकललाई सोही दिसातर्फ जाँदै गरेको मे. ३ प ४७०६ नम्बरको अर्को मोटरसाइकलले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा मे. ३ प ४७०६ का चालक बिर्तामोड ३ बस्ने …